China Ultrasonic Ballast Water Disinfection avy amin'ny rafitra fitsaboana ultrasonic sy mpanamboatra | Powersonic
Antsoy izahay: +86 15658151051
Fitaovana fanapahana ultrasonic
Processeur Liquidie Ultrasonic
Fitaovana milina ultrasonic
Famatsiana herinaratra ultrasonic
Welding amin'ny ultrasonic
Converter mpanamboatra ultrasonika
Tandroka fanamafisam-peo ultrasonika
Fitaovana fanamafisam-peo ultrasonic
Ultrasonika matetika matetika ...
Rano Ultrason Ballast Di ...
Homog ultrasonika mahery vaika ...
fitoviana ultrasonika Equiment ...
Famonoana rano amin'ny alàlan'ny rano ultrasonic ballast amin'ny alàlan'ny rafitra fitsaboana ultrasonic
sonicator homogenizer ultrasonic
mpanelingelina sela ultrasonic
MODELY SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
hatetika 20 ± 0,5 KHz 20 ± 0,5 KHz 15 ± 0,5 KHz 20 ± 0,5 KHz
fahefana 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W
Zintin'aratra 220 / 110V 220 / 110V 220 / 110V 220 / 110V
hafanana 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃
tsindry 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Ny hamafin'ny feo 20 W / cm² 40 W / cm² 60 W / cm² 60 W / cm²
Max Capacity 10 L / Min 15 L / Min 20 L / Min 20 L / Min
Fitaovana lohan'ny loha Firaka Titanium Firaka Titanium Firaka Titanium Firaka Titanium
Famonoana rano amin'ny alàlan'ny rano Ballastôna ultrasonic Ny rafitra fitsaboana ultrasonic
Fitsaboana rano amin'ny rivotra Ballastôna ultrasonia dia azo zaraina amin'ny sokajy telo manaraka ireto
Ny fitomboana malefaka toy ny spaonjy;
Ny bakteria sy ny sela biolojika, toy ny karazana bakteria sy ahidrano isan-karazany;
Biby an-dranomasina mafy, toy ny barnacles, moluska bivalve, sns.
Ny feo dia azo faritana ho angovo mekanika ampitaina amin'ny onja-tsindry amin'ny fitaovana fitaovana. Araka izany, ny feo dia azo faritana ho endrika angovo na ny feo iray dia lazaina fa mekanika. Izy io dia mampiavaka ny angovo azo avy amin'ny endrika endrika angovo hafa, toy ny angovo elektrômanetika. Ity famaritana ankapobeny ity dia mirakitra ny karazana feo rehetra, ao anatin'izany ny feo heno, onjam-peonam-potoana ambany (fotodrafitrasa) ary ultrasound.
Ny ultrasound dia tsindry feon'ny bisikileta miaraka amin'ny hatetika mihoatra ny fetra ambony amin'ny fandrenesan'ny olombelona. Na dia miovaova isaky ny olona aza io fetra io dia manodidina ny 20 kilohertz (20.000 hertz) amin'ny tanora salama sy tanora ary 20 kHz no ampiasaina ho fetra ambany kokoa amin'ny famaritana ny ultrasound.
Ny fampiharana ny ultrasound amin'izao fotoana izao dia misy ohatra: sonochemistry (emulsification, haingana ny fanehoan-kevitra simika, fitrandrahana sns.) Fanaparitahana, ary fanelingelenana ireo sela biolojika (fanaparitahana ultrasonic), fanesorana ireo gaza voafandrika, fanadiovana ireo fandotoana mikraoskaopy, hamandoana ultrasonika, fanondroana ny ultrasound (USID ), ary mazàna miditra ao anaty salantsalany ary mandrefy ny sonia taratra na manome angovo mifantoka. Ny sonia taratra dia afaka manambara antsipiriany momba ny firafitra anatiny ao amin'ny medium. Ny fampiharana malaza indrindra amin'ity teknika ity dia ny fampiasana azy amin'ny sonografia hamokarana sarin-jaza ao an-kibon'olombelona. Ny fampiharana hafa dia mampiasa ultrasound amin'ny diagnostika homamiadana.
Ny isan'ny fampiharana ultrasound dia be dia be. Ny fampifangaroana ireo refesina mety, ny amplitude havanana ary ny fampiasana ny transducer havanana karazana fampiharana ultrasound dia azo tratrarina… 'The Sky Is The Limit'…
Ny fampidirana ranoka amin'ny onja mahery vaika (na onjam-peo), ny hery toy ny streaming acoustical, ny cavitation azo antoka ary ny cavitation vetivety (tsy milamina na inertial) dia azo raisina.
Ohatra ny fanaparitahana ultrasonika, sonochemistry ary sonoluminescence dia mipoitra avy amin'ny cavitation akustika: ny fananganana, ny fitomboana ary ny firodanan'ny fipoahana ao anaty rano. Ny fianjeran'ny Cavitational dia miteraka fanafanana mahery vaika eo an-toerana (~ 5000 K), fanerena avo lenta (~ 1000 atm), ary taham-pampafana sy fihenam-bidy (> 10 9 K / seg). Ny cavitation akustika dia manome fifangaroana angovo sy zavatra tsy manam-paharoa, ary ny fanodinkodinan'ny ranon-javatra ny ultrôna dia miteraka fanehoan-kevitra simika be angovo, matetika miaraka amin'ny famoahana hazavana.
Izy io dia tsy azo tanterahina amin'ny toe-javatra manokana mahatafiditra fahita matetika amin'ny herin'ny ultrasound avo (W • cm-2, dB avo) avo lenta amin'ny habetsaky ny mari-pana somary ambany.
Teo aloha: Volo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny plastika vita amin'ny vy vita amin'ny vy 5mm
Ultrassa Degassing Ary Defoaming ny ranoka
Ireo mpanodin-tsiranoka ultrasonic
20L / Min 20khz mekanika sy ultrasonic (sonika ...
50l / Ora 1000w 20khz processeur ranon-javatra ultrasonic ...
Namboarina manokana biolojika Ultrasonic Homogenizer Zanaka ...
ultrasound Homogen homogen mahery ...
Large Scale Ultrasonic Liquid Processor Graphe ...
Titanium Horn homogenizer ultrasonic sy ny di ...